WAR CUSUB: ”AC Milan waan iibiyey waxaana la gelin doonaa lacag badan” – Berlusconi oo 30 sano kaddib caddeeyay inuu Milan ka tegayo – Gool FM
WAR CUSUB: ”AC Milan waan iibiyey waxaana la gelin doonaa lacag badan” – Berlusconi oo 30 sano kaddib caddeeyay inuu Milan ka tegayo
(Milano) 05 Luulyo 2016 – Silvio Berlusconi ayaa laga soo saaray isbitaalkii qalliinka lagula sameeyay ee San Raffaelle isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iibiyey AC Milan oo labada sano ee soo aaddan la gelin doono €400m oo euro oo ciyaartooy kusoo iibsan doonto.
Madaxwaynaha Milan oo qalliin looga sameeyay wadnaha ayay taasi waxay gaabis ka dhigtay qorshihii lagu iibin lahaa kooxda oo markii hore ahaa 30-ka bishii hore, balse haatan waxaa la sheegayaa in heshiiska la saxiixi doono 12-15-ka bishan.
“Milan waxaan uga tegey guruub doonaya inay ka dhigaan koox markale ka muuqata Talyaaniga, Yurub iyo caalamka,” ayuu Berlusconi saxaafadda ugu sheegay bannaanka isbitaalka isagoo garabka haysta nin kale oo uu taageeranayey sida uu qoray Calciomercato.it.
“Waxaan ka dalbaday inay bixiyaan €400m oo looga soo adeegayo suuqa muddo 2 sano ah. Waa koox muhim ah oo hoos tagta dowladda Shiinaha.” ayuu raaciyey isagoo sheegay inuu soo maray qalliin xanuun badan balse uu haatan roon yahay.
AC Milan ayaa la sheegayaa inay Shiineysku iibsadeen 80% iyadoo 20% ay sii hayn doonaan reer Berlusconi labada sano ee soo socota iyagoo 80% ku bixinaya 740 milyan oo euro, balse tillaabadan ayaa ka fujin doonta taageerayaasha Milan oo ay kooxdoodu 3 sano Yurub ka maqnayd.
Pepe oo dib ugu soo laabtay tababarka xulkiisa Portugal ka hor kulanka Wales